Diyaarso booqashadaada dhakhtarka – toban talo - 1177 Vårdguiden
1. Dooro rugta caafimaad ee aad tegi doontid
Marka aad raadsanayso daryeel caafimaad adiga ayaa dooran kara rugta caafimaad ee aad tegi doontid. Waxa aad rug caafimaad ka dooran kartaa dalka oo dhan, iyadoo aan loo eegayn meesha aad kaga jirtid diiwaan-gelinta dadka.
Waxa aad dooran kartaa daryeel bixiye ah dhinaca caafimaadka aasaasiga ah, tusaale ahaan rug caafimaad, iyo dhinaca daryeel caafimaadka takhasuska ah ee furan, tusaale ahaan rugta caafimaadka caruurta. Dhinaca daryeelka caafimaad ee takhasuska waxa loo baahan karaa warqada dhakhtarka ee u gudbinta daryeel caafimaad ama isbitaal gaar ah.
Haddii aad doorato rug caafimaad oo cusub ama rug cafimaad takhasus ah markaasi shaqaalaha halkaasi ma arki karaan diiwaanadaada yaala daryeel bixiye hore. Haddii aad doonaysid in daryeel bixiyaha cusub arki karo diiwaanadaadi hore waa inaad adigu bixiso oggolaanshaha arrintan. Daryeel bixiyaha cusub kala hadal sida ay arrintani u dhacdo.
Damaanad qaadka daryeelka caafimaad wuxu sheegaa dhererka mudada aad adigu ugu badnaan u baahantahay inaad sugto si aad u hesho xidhiidhka daryeelka caafimaadka. Haddii aad doorato daryeel caafimaad oo ku yaala maamulka caafimaadka gobo lama gobol kale markaasi ma shaqaynayo damaanad qaadka daryeelka caafimaad.
2. Hubso inaad fahamtay
Marka aad la joogto dhakhtar waxa muhiim ah in aad fahamtay waxa la sheegay iyo waxa micnaheedu tahay. Shaqaalaha caafimaadka waa inay hubsadaan in aad fahamtay warbixinta, tusaale ahaan sida dawo loo qaadanayo. Wixi ugu muhiimsan waxa aad codsan kartaa in aad qoraal ahaan u hesho. Waxa kale oo aad codsan kartaa inaad hesho kulan cusub oo aad la yeelato shaqaalaha caafimaadka si aad jawaab ugu hesho su'aalahaaga.
Dhamaan warbixinaha waa in adigu lagu waafajiyo. Haddii ay kugu adagtahay fahamka ama ku hadalka iswiidhishka waxa aad codsan kartaa inaad hesho caawimaada turjubaan. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii aad leedahay hoos u dhac maqalka ah, hoos u dhac araga ah ama dhego/indho la'aan. Sheeg inaad u baahantahay turjubaan marka aad la xidhiidhayso rug caafimaad ka hor booqasho.
Caruurtu waxa ay xitaa xaq u leeyihiin inay ka qayb qaadasho ku lahaadaan daryeelka caafimaad ee ay helayaan. Ma jiro xad da'da ah oo loogu talo galay xilliga ilmo uu ka mid ahaan karo oo go'aamin karo dhinaca xaalad daryeel caafimaad balse waxay ku xidhantahay bisaylka ilmaha iyo xaalada daryeelka caafimaad.
Haddii aanad qayb ahaan u heli karin warbixin, tusaale ahaan iyadoo ay sabab u tahay ilowshaha ay da'du keento, waa in shaqaalaha caafimaadku taas baddelkeeda ay warbixinta siiyaan dadka kuugu dhow.
4. Waa inaad ka qayb qaadataa daryeelkaaga caafimaad
Waxa aad xaq u leedahay inaad aragti ka dhiibato daryeelkaaga caafimaad oo aad ka mid ahaato isla markaana go'aamiso marka ay suurtagal tahay. Laakiin si aad u lahaato ka qayb qaadasho waa inaad heshaa warbixin qof ahaan kugu haboon oo ku saabsan:
Noocyada qaababka jira ee baaritaan, daryeel caafimaad iyo daweyn.
Noocyada khatar ama saamayn ee la socda baaritaanada iyo dawooyinka.
Xilliga aad filan karto inaad hesho daryeel cafimaad.
Daryeelka ama dawooyinka la filayaa sida ay u eekaan karaan.
Daryelka ka dib, waxa weeye daryeelka iyo xanaanada aad u baahantahay ka dib.
Waxa aad samayn karto si looga hortago inaad xanuusato ama dhaawacanto
Haddii laxaadkaagu kala dhantaalanyahay waa inaad hesho warbixin ku saabsan noocyada qalabka la adeegsado ee shaqada fududeeya ee la helayo.
5. Ka hor baaritaanada iyo daryeelyada
Marka aad hesho ogaanshaha nooca cudurka waxa badanaaba jira nidaamyo loogu talogalay baaritaanada iyo daryeelyada. Mararka qaarkood waxa jira kala doorashooyin baaritaanada iyo daryeelyada ah oo la kala dooran karo. Markaasi waxad xaq u leedahay inaad hesho warbixin ku saabsan kuwaasi, isla markaana in aad doorato sida lagu baarayo ama laguu daryeelayo.
Adiga ayaa dooranaya haddii aad oggolaanaysid ama diidaysid in lagu baaro ama lagu daryeelo.
Bukaan socod ahaan ma ku khasbi kartid shaqaalaha caafimaadka inay sameeyaan waxyaabo ka soo horjeeda cilmiga iyo waxa khibrad lagu soo tijaabiyay. Shaqaalaha caafimaadka waajib kama saarna inay ka qayb qaataan daryeelyada leh dawooyin doorasho kale ah.
6. Adigu waad diidi kartaa
Si weyn waxa aad xaq u leedahay inaad diido daryeelka caafimaad ee laguu soo bandhigo. Waxyaabo ka reeban ayaa jira marka ay noqoto daryeelka khasabka ah ee cilmi-nafsiga iyo iyo cudurada lagu magacaabo kuwa faafa ee khatarta u leh dadweynaha, tusaale ahaan HIV, kuwaas oo ku nidaamsan sharciga ilaalinta faafinta.
Dadka kuugu dhow xaq uma laha inay go'aamiyaan wax ku saabsan daryeelka caafimaad ee aad heli doontid. Haddii adigu qof ahaantaada aanad cabbiri karin waxa aad doonaysid markaasi shaqaalaha caafimaadka ayaa qof ka mid ah qaraabadaada weydiin kara haddii ay garanayaan sida aad adigu doonaysid.
7. Adiga ayaa go'aaminaya haddii dadka kuugu dhow ay wax ogaanayaan
Mararka qarkood waxa fiicnaan karta in qof kuu dhow kula socdo xilliga booqashada. Isaga ama iyada waxa ay caawimaad gaysan karaan in la xusuusto wixi la sheegay iyo inay ahaadaan taageero caadifad ahaan. Laakiin waa adiga qofka go'aaminaya waxa dadka kuu dow ay ogaan karaan. Sir haynta shaqada iyo qarsoodiga ayaa keenaya in dadka kuu dhow ay heli karaan oo keliya warbixinta haddii adigu aad joogtid xilliga booqashada, laakiin waxa aad u sheegi kartaa shaqaalaha caafimaadka in dadka kuu dhow inay heli karaan warbixinta. Shaqaaluhu waxay badanaaba su'aalaan qofka ay siin karaan macluumaadka.
Haddii aad ka yartahay 18 sanno oo daryeel caafimaad raadsanayso, xaaladaha badankooda, ma loo baahna in dadka waaweyn ee guriga ay ogaadaan. Iyaga ma lala xidhiidho tusaale ahaan haddii adigu
aad tagto rugta qaabilaada da'yarta
la kulmayso la taliye
helayso caawimaada ka hortaga uureysiga
iska baarayso cudurada galmada lagu kala qaado.
Sidoo kale iyagu uma baahna inay ogaadaan inaad daryeel ka raadsatay rug caafimaad. Ta go'aamisa haddii dadka waaweyn lala xidhiidhayo waa waxa aad daryeelka caafimaad u raadsatay balse xitaa da'daada iyo sida aad bisaylka u tahay. U sheeg dhakhtarkaaga haddii aanad doonayn in waalidkaaga lala xidhiidho. Wixi dheeraad ah ee ku saabsan sir haynta shaqada iyo qarsoodiga waxad ka akhrisan kartaa UMO.se.
Marka ay khuseyso caruurta yar yar dadka haysta mas'uuliyada sharciga ee ilmaha ayaa go'aaminaya haddii warbixinaha la bixin karo iyo in kale. Laakiin marka ilmhu sii weynaado oo sii bislaadaba wuxu ilmuhu si dheeraad ah u go'aamin karaa haddii shaqaalaha caafimaadku ay bixin karaan macluumaadka iyo cida la siinayo.
8. Su'aal waxa dhacaya ka dib
Waa inaad ogaatid xilliga iyo qofka aad la xidhiidhayso si aad u hesho jawaabaha ka dib dhiig qaadista iyo baaritaanada. Waa inaad xitaa ogaatid meesha aad la xidhiidhayso haddii aad sii xanuusato.
Haddii aad daryeel caafimaad ka heshay isbitaal waa in adiga iyo shaqaalaha caafimaadka aad si wada-jir ah u samaysaan qorshe daryeel oo go'aamisaan qorshe daryeel ka hor intaanad ka soo bixin.
Haddii aad xidhiidhyo kala duwan oo badan ku leedahay dhinaca daryeelka caafimaadka iyo daryeelka, markaasi waxad codsan kartaa inaad hesho xidhiidh daryeel oo joogto ah. Isaga ama iyada ayaa isku dubaridi kara dhamaan kuwa aad la xidhiidhi doontid.
10. Haddii aanad ku qanacsanayn
Haddii aanad ku qanacsanayn daryeelka adiga ama qof kuu dhow helay, waxa fiican in aad soo bandhigto aragtiyahaaga. Qaabkan waxa aad caawimaad ka gaysanaysaa in la sii wanaajiyo daryeelka caafimaadka.
Ugu horeyn waxa fiican inaad toos ula xidhiidho dhakhtarka ama shaqaalaha caafimaadka ee ku baaray ama ku daweeyay. Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa madaxa hawlaha qaybta aad daryeelka ka heshay. Qaybtaas waa ina baaraan waxa dhacay oo sheegaan waxa ay samayn doonaan si aanay tani u dhicin mar kale.
Waxa kale oo aad la xidhiidhi kartaa Guddiga bukaanka (Patientnämnden) si loo helo caawimaada su'aalaha. Maamulka caafimaadka ee gobol kasta waa inuu lahaado guddiga bukaanka (patientnämnd) ama wakiilka bukaanka (patientombudsman) oo ay tahay inay ku caawiyaan. Guddiga bukaanka iyo wakiilka bukaanka waxa ay gudoomaan aragtiyaha iyo cabashada, laakiin awood uma laha in ay go'aamiyaan in shaqaalaha caafimaadku khalad sameeyay. Xitaa ururada bukaanka ayaa mararka qaarkood kaa caawin kara dhinaca maareynta arrimaha khuseeya cabashada.
Haddii aad u aragto in lagugu takooray daryeelka caafimaadka waxa aad tani ku wargelin kartaa wakiilka takoorka (diskrimineringsombudsmannen), DO.
Haddii aad ku dhaawacantay daryeelka caafimaadka ama aad aragtay galdalooloyin dhinaca ammaanka bukaanka ah waxa aad ku wargelin kartaa IVO, Baaritaanka daryeelka caafimaadka iyo xanaanada. Iyagu waxa ay eegaan ugu horeyn wixi khalad ahaa iyo sababta si dhacdo la mid ahi aanay u dhicin mar kale.